अन्तर्राष्ट्रिय होटल परियोजनाहरु
सर्ट द्वारा: सिर्जना मा जोडी द्वारा
प्रकार, लाभ र लागत: Armati तपाईं कम-प्रवाह स्नान फिक्स्चर भन्नुहोस्
पोस्ट लिउ शिंग द्वारा
कम प्रवाह जुडनार राष्ट्रिय ऊर्जा नीति ऐन द्वारा mandated गरिएको छ। कम प्रवाह जुडनार आफ्नो Remodeling वा निर्माण परियोजनामा ​​एक दिगो उपाय महत्वपूर्ण बचत संग homeowner प्रदान गर्न र हुन सक्छ। जब गैर-कम-प्रवाह जुडनार तुलनामा यस्ता शौचालय, नल Aerators र शवर टाउको रूपमा कम प्रवाह जुडनार, एउटै उपयोगिता प्रदान गर्न सक्छन्।
आफ्नो प्रविधि कम प्रवाह दृढता निर्माताहरु भिन्न प्रयोगतर तिनीहरू नै परिणाम संग प्रदान गर्न सक्छन्, र नयाँ तंत्र कम प्रवाह जुडनार संग प्रयोग गर्न विकसित भइरहेका छन्।
कम प्रवाह स्नान पूर्वसूचना
कम प्रवाह शवर टाउको वर्ग इन्च (साई) प्रति 2.5 पाउण्ड को एक पानी दबाव मा 80 जीपीएम भन्दा कम को एक प्रवाह दर संग हुन्छन्। तर, हालका कम प्रवाह शवर टाउको पनि 2.0 भन्दा कम जीपीएम एक प्रवाह दर प्रदान गर्न सक्छन्। कम प्रवाह दुई आधारभूत प्रकार शवर टाउको हो:
Laminar-प्रवाह - Laminar-प्रवाह शवर टाउको पानी प्रवाह गठन हुनेछ र बढि सही तापमान नियन्त्रण संग प्रदान गर्नेछ।
Aerating - कम प्रवाह शवर टाउको यस प्रकारको हावा पानी स्प्रे को एक कुइरो लागेको प्रकार निर्मित संग पानी मिश्रण हुनेछ। यो बाफ र चिस्यान को एक महान रकम सिर्जना गर्नेछ, र आर्द्र जलवायु मा सिफारिस गरिएको छैन।
कम प्रवाह शवर टाउको 5.5 जीपीएम एक प्रवाह दर संग डिजाइन थिए पाका प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
कम प्रवाह शौचालय
कम प्रवाह शौचालय र अति कम प्रवाह शौचालय परम्परागत शौचालय को पानी आधा रकम प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको छ। कम प्रवाह शौचालय 1.6 GPF, सट्टा 3.5 GPF averaging छन्.
कम प्रवाह शौचालय को डिजाइन कारण केही मोडेल एक कुशल तरिका मा शौचालय फ्लश सक्दैन दावी आगो गरिएको छ। पछि प्रविधी र शौचालय प्रदर्शन राहत स्तरवृद्धि गरिएको छ यी समस्या, र तिनीहरूले डिजाइन, बहुमत, संग तरल फोहोर लागि आधा फ्लस विकल्प र ठोस अपशिष्ट निपटान लागि पूर्ण फ्लस.
धेरै कम प्रवाह शौचालय पनि जल खण्डमा व्यापक छ किनभने clog समस्या कम गर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
गुरुत्वाकर्षण-हाँ कम प्रवाह शौचालय - कम प्रवाह शौचालय यस प्रकारको को कचौरा यसलाई धक्का तल पानी को परम्परागत वजन प्रयोग गर्दछ। तिनीहरूले सस्ता र कम हल्ला कम प्रवाह शौचालय दबाव-सहायता छन्।
दबाव-असिस्टेड कम प्रवाह शौचालय - कम प्रवाह शौचालय यस प्रकारको सामान्यतया noisier छ तर जब गुरुत्वाकर्षण-खुवाउनुभयो शौचालय तुलना 45% द्वारा पानी खपत कम गर्न सक्छ। यो सिस्टम पानी धक्का तल ट्यांक भित्र बनाइयो हावा दबाव प्रयोग गर्दछ।
के Faucets बारे?
पुरानो डुब्नु faucets पनि पानी र पैसा धेरै बर्बाद गर्न सकिन्छ। तपाईं आफ्नो faucets प्रतिस्थापन यसलाई 2.5GPM भन्दा बढी प्रयोग गर्छ भने विचार गर्नुपर्छ। त्यहाँ तपाईं कि पुरानो faucer प्रतिस्थापन गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ विचार को एक जोडी हो। तपाईं 1.5GPM भन्दा कम संग सामान्यतया वा फावडा स्थापना गरेर, नयाँ नल प्रतिस्थापन गर्न चाहे चयन गर्न सक्नुहुन्छ। को फावडा वा प्रवाह restrictir वर्षौंदेखि तपाईंले केही पैसा बचत हुनेछ सजिलो र सस्तो परिमार्जन लागि प्रदान, लगभग कुनै पनि नल गर्न थप गर्न सकिन्छ।
कम प्रवाह फिक्स्चर प्रयोग को लागत लाभ
जब परम्परागत जुडनार तुलनामा कम प्रवाह जुडनार पक्कै procure गर्न केही थप अग्रिमसँग लागत आवश्यकता हुन सक्छ।
तथापि, पछि धेरै भवन कोड कम प्रवाह जुडनार छ गर्न आवश्यक, हामी धेरै लागत यी जुडनार को प्रकार तपाईंको निर्माण प्रस्ताव थप्न सक्नुहुन्छ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ। निर्माता आधारमा, आधारभूत शौचालय बीच $ 75 र $ 450, केवल दृढता खर्च गर्न सक्छन्। एक कम प्रवाह शौचालय सजिलै निर्माता आधारमा बारेमा 100 थप $ खर्च गर्न सक्छन्, तर ग्राहक लागि payback छिटो तीन रूपमा वर्ष पानी उपयोग मा बचत कारण हुन सक्छ।
कम प्रवाह फिक्स्चर लाभ
Retrofitting लागि आदर्श
कम प्रवाह शौचालय चार-सदस्य परिवारको लागि भन्दा बढी 20,000 प्रति वर्ष पानी गैलन बचत गर्न सक्नुहुन्छ
रंग र शैलीहरू एक विस्तृत एरे मा उपलब्ध छ।
नलसाजी र यांत्रिक अधिकारीहरु को अन्तर्राष्ट्रिय संघ (IAPMO) द्वारा नियमन
उपयुक्त अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान (एएनएसआई) पूरा गर्नै पर्छ
पानी-कुशल शौचालय आफ्नो मासिक पानी बिल पैसा बचत गर्नुहोस्।
Armati तपाईं भन्नुहोस् कसरी मरम्मत गर्न साधारण जल नल समस्याहरू
आज पानी faucets थप परिष्कृत भएका छन्, र यी faucets स्थापना वा निवारण को कार्य गाह्रो भएको छ। एक नल स्थापना गर्न प्रक्रिया अपेक्षाकृत नै प्रक्रिया छ, तर आजको प्रविधि तपाईं सजग हुनु आवश्यक छ कि विभिन्न घटक ल्याउँछ।
साधारण नल मुद्दा
यसलाई जडान गरिएको छ एक पटक, केही मुद्दाहरू जस्तै लिक, squeaks र अन्य समस्या जस्तै, आफ्नो नल को प्रदर्शन असर गर्न सक्छ।
का केही सामान्य समस्याहरू र तिनीहरूलाई समाधान कसरी माथि जाने गरौं।
कम पानी दबाव
सामान्यतया, एक नल देखि कम पानी दबाव यसको स्प्रेयर diverter कारण छ। को diverter वाल्व नल शरीर भित्र स्थित एउटा सानो टुक्रा छ। को diverter को नल मा जा पानी नियन्त्रण, त्यसैले यसलाई सफा-यो छ कि सानो मलबे र खनिज संग भरा हुन सक्छ तपाईं जाँच गर्नुपर्छ। यदि diverter भरा छैन, तपाईं diverter प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक हुन सक्छ।
तपाईं कम पानी दबाव मा एक दोषी नही हुन सक्छ कि अर्को क्षेत्र फावडा छ। को diverter जस्तै फावडा एक ब्रश र सफाई समाधान संग साफ गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि सामाग्री हटाउन र यसलाई unclog गर्न सिरका प्रयोग गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, समस्या उपयोगिता देखि बाहिर आ र पानी आपूर्ति वाल्व सबै बाटो बन्द छन् जाँच पानी दबाव छैन निश्चित गर्नुहोस्।
नल देखि धुंध स्प्रे
पानी एक तुवालो जब तपाईं नल प्रयोग मुख्य प्रवाह देखि बन्द स्प्रे यदि, तपाईं फावडा कस मा स्क्रूड छ जाँच गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ।
यसलाई भरा सकिएन रूप मा, फावडा देखि खनिज, टेप वा मलबे हटाउन कपडा वा ब्रश प्रयोग गर्नुहोस्। पनि फावडा वशर जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्।
को फावडा पुन र फेरि जाँच गर्नुहोस्। समस्या अझै पनि देखाउँछ भने यो टूट रूपमा सक्छ वा क्षतिग्रस्त तपाईं फावडा प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक हुनेछ।
नल ह्यान्डल लिक
जब तपाईं कि पानी नल लिक रूपमा यो लिक को प्राथमिक कारण हुन सक्छ, यो ह्यान्डल मा पैकिंग नट कस, प्रयास पत्ता लगाउन।
कहिलेकाहीं एक क्षतिग्रस्त हे-घन्टी प्रतिस्थापित गर्न आवश्यक छ।
हे-घन्टी प्रतिस्थापन गर्न, पानी आपूर्ति लाइन बन्द बन्द, को नल खोल्ने र तपाईं सामना छन् भनेर समस्या आधारमा आवश्यक छ यदि क्यासेट प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। हे-छल्ले प्रतिस्थापन गर्दा, टोंटी को भित्र र वाल्व शरीर बाहिर सफा। हामी पनि टोंटी सिलिकन आधारित चिल्लो संग ओ-छल्ले स्नेहन सुझाव दिन्छौं।
को आपा देखि Drips
अर्को साधारण समस्या नल टोंटी देखि drips छ। तपाईं एक सङ्कुचन शैली नल स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सीट वशर प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक र / वा वाल्व सीट प्रतिस्थापन गर्नेछ।
अन्य सबै पानी faucets लागि, तपाईं मात्र वाल्व सीट प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक हुनेछ।
तपाईं पानी नल बन्द पछि जब तपाईं हल्ला सुन्न, यो पानी हथौडा हुन सक्छ। यो एक हावा कोठामा स्थापना गरेर हल हुन सक्छ।
तपाईंले पहिले नै हावा Chambers स्थापित छ भने, पानी आपूर्ति, बन्द पानी लाइन सकिन र फेरि पानी बन्द। पानी नल चालू पछि हल्ला हुन्छ जब वाल्व नयाँ वशर आवश्यक पर्दछ, वा आपूर्ति लाइन बाट पानी आउने दबाबको पनि उच्च वा धेरै कम या त छ।
नल ह्यान्डल संचालन गर्न गाह्रो छ
ह्यान्डल सञ्चालन गर्न sediments वा मलबे को क्यासेट क्षतिग्रस्त भएकोले उत्पन्न हुन सक्छ सामान्यतया एउटा कठिन।
मलबे, धातु टुक्रा र खनिज को क्यासेट भित्र छाप बिगार्न सक्छ।
तपाईं पनि कारतूस प्रतिस्थापन वा सिलिकन आधारित चिल्लो यसलाई चिकनाना आवश्यक हुन सक्छ। प्लम्बर गरेको ग्रेड नल तेल, सिलिकन स्प्रे वा पेट्रोलियम समावेश गर्न सक्छ भन्ने कुनै पनि स्नेहक प्रयोग नगर्नुहोस्। पेट्रोलियम आधारित स्नेहक रबर छाप साथ प्रतिक्रिया हुन सक्छ र ह्याण्डल सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो बन्न सक्छ।
Armati तपाईं सही नलसाजी पाइप कसरी छनौट गर्ने गाइड सिकाउनुहोस्
त्यहाँ आवासीय वा व्यापारिक भवन लागि पाइपलाइन पाइप को धेरै प्रकार छन्। यस्तो PEX, कपर र पीवीसी रूपमा पाइपलाइन पाइप आफ्नो आवेदन र तिनीहरूले स्थापित जुन स्थान आधारमा सामान्य प्रयोग गरिन्छ। साथै यस्तो कालो, जस्ती र पीतल रूपमा केही अन्य पाइपलाइन पाइप प्रकार छन्। का सबै भन्दा साधारण प्रयोग पाइपलाइन पाइप लागि सबै भन्दा राम्रो आवेदन तल हेरौं।
स्टेनलेस स्टील पाइप। फोटो हंस Pixabay
स्टेनलेस स्टील धेरै चिटिक्क हेर्न सक्छन् तर यो धेरै expensive.Stainless स्टील पाइप जंग विषय क्षेत्रमा र तटीय क्षेत्रमा नजिकै प्रयोग गरिन्छ छ। पाइप यस प्रकारको दुवै लचिलो र कठोर मा उपलब्ध छ र केही विशेष couplings पाइप अन्य प्रकार संलग्न हुन आवश्यक हुनेछ। जस्ती पाइप संग स्टेनलेस स्टील पाइप भ्रममा छैन। यसलाई विभिन्न आकार र लम्बाईहरू मा उपलब्ध छ।
PEX पाइपलाइन धेरै गुना। फोटो Makdesignbuild.com
PEX पाइपिंग आवासीय र साना व्यापार आवेदन मा एक लोकप्रिय चयन भएको छ कि एक लचिलो प्लास्टिक पाइपिंग छ। अलिकति उच्च प्रारम्भिक लागत हुनत, यसको न्यूनतम मर्मतका र छिटो स्थापना प्रक्रिया यो सबै भन्दा राम्रो पाइप एक भवन भित्र पानी वितरण गर्छ। PEX पाइपिंग तामा पाइपिंग माथि साँच्चै लिक-मुक्त उत्पादन भेटी लाभ प्रदान गर्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कमियां एक किनभने यूवी रेज बिगार्न सक्छ आउटडोर प्लास्टिक तह छ यसलाई बाहिरी आवेदन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ।थप
कपर गरमा नलसाजी मा प्रयोग
यो कटौती गरिएको छ पछि सफा तामा। फोटो Cedarcityrecycling.com
कपर पाइप शायद सबैभन्दा परम्परागत पाइपलाइन आफ्नो व्यापक अवधि र विश्वसनीयता कारण प्रयोग पाइप छन्। तिनीहरूले उच्च जंग प्रतिरोध, ठूलो भौतिक तातो र चिसो पानी को लागि प्रयोग गर्न प्रदान गर्न, र यो सजिलै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। तर, तामा पाइपिंग प्रयोग गरेर यसलाई सँगै soldered गर्न आवश्यक र यो अतिरिक्त फिटिंग आवश्यक हुन सक्छ अघि विचार गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक। सबैले टांका तामा पाइप मा राम्रो छ, तर कपर पाइप्स कसरी मिलाप गर्न लेख तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ।
परमवीर चक्र गरमा
पीवीसी पाइप। फोटो publicworksgroup फ्लिकर
परमवीर चक्र पाइपलाइन पाइप चिसो र तातो पेय जल साथै संग मलजल आवेदन प्रयोग गरिन्छ। पीवीसी पाइप जहाँ यो प्रयोग गरिनेछ आवेदन आधारमा आफ्नो मोटाइ र कन्फिगरेसन मा फरक हुन्छन्। उदाहरणका लागि, दबाव पानी पाइप, छैन ढल पाइप जस्तै, र आँधी ड्रेनेज सिस्टम प्रयोग गरिन्छ व्यक्तिहरूलाई जस्तै हो। पेय जल आवेदन डिजाइन प्लास्टिक पाइपलाइन उत्पादनहरु सामान्यतया उत्पादन NSF / एएनएसआई मानक 61 को स्वास्थ्य प्रभाव आवश्यकताहरु सँग मिल्ने संकेत त "NSF-पीडब्लू" वा "NSF-6" संग डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
जस्ती नलसाजी पाइप्स
जस्ती पाइप। फोटो होम डिपो
जस्ती पाइपिंग आवासीय परियोजनाका लागि मानक रूपमा धेरै वर्ष पहिले प्रयोग भएको थियो। खियाले सानो व्यास पाइप भित्र निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तथापि, समय यसलाई कम बारम्बार प्रयोग गरिन्छ। पाइप पर्याप्त पुरानो छ भने, त्यसपछि तपाईं पानी खियाले निशान संग नल देखि आ मात्रा पाइप को भित्र बाट छाडा विच्छेद गर्न रूपमा हेर्न सक्छन्। जस्ती पाइप खैरो पानी वा गैह्र पानी ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पीतल पाइप पाइपलाइन मा प्रयोग
पीतल पाइपलाइन। फोटो EugenesDIYDen Pixabay
यसलाई% तामा 67 गर्न 85% बनेको छ भने पीतल पाइपलाइन पाइप, ठूलो खियाले प्रतिरोध पाइपिंग प्रदान गर्नुहोस्। यस मिश्र धातु 85% तामा समावेश गर्दछ र रातो पीतल पाइप भनिन्छ जब सबै भन्दा राम्रो पीतल पाइप ग्रेड प्राप्त छ। पीतल पाइपिंग को भित्री मा जंग गर्दैन एक दिर्घकालिन सामाग्री प्रदान गर्दछ र यो पाइप भित्र घर्षण घाटा गराउँछ छैन। पीतल पाइपलाइन पाइप तातो-पानी र यस्तो पम्प फिटिंग, पानी ट्यांकी, र वेल्स रूपमा ठूलो वितरण प्रणाली, को लागि इस्पात पाइप भन्दा मुद्दा सजिलो र उत्कृष्ट छन्। पीतल पाइप सामान्यतया कुनै पनि अन्य पाइपलाइन सामाग्री भन्दा लामो पछिल्लो गर्छन। पीतल पाइप साधारण 12-खुट्टा सीधा लम्बाईहरू मा आउँछ।
फलाम गरमा कास्ट
फलाम पाइप डाली। फोटो McWane, Inc
कच्चा फलाम पाइपलाइन पाइप सामान्यतया घण्टी-र-spigot प्रकार निर्मित छन्। यो थ्रेड जोइन्टहरूमा पनि फेला तर घण्टी र spigot एक भन्दा बढी महंगा छन् गर्न सकिन्छ। यी पाइप कुनै पनि अन्य पाइप, सामान्यतया पानी वितरण प्रणाली, वा जल वा ढल प्रणाली मा मुख्य पाइप रूपमा भूमिगत स्थापनाका लागि प्रयोग भन्दा भारी छन्। सामान्यतया छ विनिर्माण कि सानो आकार4"पाइप, पर्याप्त ठूलो आवासीय आवेदन मा प्रयोग गरिएको छ। कच्चा फलाम पाइप भारी छ र तपाईं एक संयुक्त भेला हुनु गर्दा समर्थित हुनुपर्छ।
Armati तपाईं शौचालय भन्नुहोस्: शौचालय गाइड सुझाव
शौचालय निरन्तर र एक बाथरूम को सबै भन्दा अनदेखी टुक्रा एक प्रयोग साँच्चै महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। मान्छे एक बाथटब वा सट्टामा शौचालय ध्यान को व्यर्थ थप केन्द्रित हुनेछ। त्यहाँ यस्तो परम्परागत, कम स्तर रूपमा शौचालय को धेरै प्रकार, हो फिर्ता पर्खाल गर्न, पर्खाल हङ, र धेरै। तर यो सबै शौचालय मानक शौचालय हो भनेर थाह साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हाम्रो शौचालय गाइड जाँच गर्न निश्चित हुन।
तपाईं आफ्नो अर्को शौचालय किन्न अघि यो शौचालय गाइड तपाईंलाई सहयोग गर्नेछ। त्यसैले निश्चित हुन:
निर्णय तपाईं एक टुक्रा वा दुई टुक्रा शौचालय प्रयोग गरिने यदि
चयन गरिएको शौचालय स्थानीय स्तर अनुपालन मा हुनेछ
स्थापना को प्रकार चयन गर्नुहोस्
जहाँ शौचालय स्थापना हुनेछ उपलब्ध ठाउँको मापन
सम्भव भएसम्म, एक ब्रांडेड नाम बाट शौचालय किन्न प्रयास
एक परिपत्र वा लम्बी शौचालय कचौरा बीच निर्णय
को गाइड साथै, यी महत्त्वपूर्ण शौचालय सुविधाहरूको पनि विचार
पारंपरिक शौचालय को 1.28 गैलन संग तुलना केही शौचालय Saving- पानी, पानी अर्थमा प्रमाणीकरण, उच्च-दक्षता 1.6 गैलन वा प्रति फ्लस कम संग निस्तब्धता शौचालय सक्थे।
दोहोरो Flush- तपाईं तरल लागि आंशिक फ्लस वा ठोस फोहोर लागि पूर्ण फ्लस गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्न सक्ने एक शौचालय चयन गर्न चाहनुहुन्छ?
शौचालय बाउल Height- सुविधा शौचालय गैर-परम्परागत शौचालय रूपमा मानिन्छ। एक मानक कचौरा रिम तल्ला माथि बारेमा 15 इन्च स्थित छ, तर शौचालय मा 17 इन्च भन्दा राम्रो व्यक्तिहरूलाई मानिन्छ कटोरे। एक 17 इन्च र पनि एक 19 इन्च शौचालय कचौरा उचाइ पनि अशक्तताको ऐन संग अमेरिका अनुपालन मा हुनेछ।
, थप स्थान ओगटेको हुनत थप बस्ने ठाउँ प्रदान गर्दछ र कम odors उम्कन गर्न अनुमति दिन्छ कचौरा, एउटा लम्बी कचौरा shape-। एक लम्बी कचौरा "एक मानक कचौरा भन्दा लामो अप6गर्न सक्छ रूपमा विचार यो लिनुहोस्।
एक टुकडा Toilet- दुई टुक्रा शौचालय एक सस्ता भन्दा टुक्रा गरेको हो तर तिनीहरूले ट्यांक र कचौरा बीचमा धूलो संचित गर्छन। एक-टुक्रा शौचालय अधिक महंगा छन् र दुई-टुक्रा शौचालय भन्दा स्थापना गर्न कठिन हुन सक्छ। प्रदर्शन को लागि तिनीहरूले लगभग एउटै हो।
फ्लस Systems- रबर flappers विगतका कुराहरू हुन्। पुरानो flappers भन्दा बढी विश्वसनीय छन् कि नयाँ फ्लस टावर खोज्न। दबाव-सहयोग शौचालय गुरुत्वाकर्षण शौचालय भन्दा बढी पानी-कुशल flushers छन्।
Valve- कम्तिमा एक3इन्च फ्लस वाल्व छ कि शौचालय पछि जानुहोस्। परम्परागत शौचालय नयाँ भन्दा कम thrust वितरण गर्ने एक2इन्च वाल्व छ।
कुनै न कुनै-मा पानी लाइन प्रवेश फिर्ता पर्खाल बाट Dimensions- दूरी मोडेल, त्यसैले तपाईँले आफ्नो नयाँ शौचालय प्राप्त अघि सोध्न मोडेल देखि फरक हुन्छ।
Noise- शोर आफ्नो शौचालय उच्च ट्रान्जिट क्षेत्रमा नजिकै स्थापित गर्न जाँदै गर्दा एक कारक हुन सक्छ।
Color- भन्दा 80 प्रतिशत, परम्परागत सेतो पछि गो हुनत थप र थप मान्छे प्रत्येक दिन नयाँ विदेशी रंग प्रयास गर्दै थप।
पानी Lines- प्रयोग लचिलो स्टेनलेस स्टील पानी सट्टा वा कठोर Chrome-platted तामा रेखाहरू रेखाहरू।
बन्द-बन्द Valve- एक बन्द-बन्द वाल्व लागि कनेक्शन को धेरै प्रकार छन्। मिलाप जडान र एक सङ्कुचन जडान सबैभन्दा प्रयोग हो, तर तिनीहरू फरक जडान केही क्रमबद्ध आवश्यक पर्दछ रूपमा पुरानो फलाम पाइप छैन भनेर ढुक्क हुन।
यी शीर्ष शौचालय निर्माता तपाईं अमेरिकामा पाउन सक्नुहुन्छ छन्। यो सबै अघिल्लो कारक र कति पैसा ग्राहक भुक्तानी गर्न इच्छुक छ निर्भर हुनेछ।
Toto-Toto शौचालय निर्माता को ठूलो3मध्ये एक छ
Kohler- Kohler उचित मूल्यहरु मा धेरै राम्रो उत्पादन प्रदान गर्दछ।
अमेरिकी मानक-लागि शुद्ध मूल्य, अमेरिकी मानक शौचालय एक योग्य प्रतियोगी छ।
Armati तपाईं तौलिया पल्ट स्थापना उचाई र अन्य स्नान सहायक सिकाउनुहोस्
तौलिया रिङ र अन्य बाथरूम सहायक स्थापना हाइट्स
बाथरूम सामान सामान्यतया remodeling वा निर्माण प्रक्रियामा गर्दा स्थापित गर्न नवीनतम कुराको एक हो। तथापि, तपाईं बाथरूम सामान स्थापना गर्न कसरी र कहाँ थाहा छैन, त तपाईं बडा समस्या मा तपाईं अनावश्यक ड्रिलिंग द्वारा क्षति पैदा टाइल्स भन्दा ड्रिलिंग गर्न सकिएन रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ केही सिफारिश हाइट्स भनेर बाथरूम सामान स्थापना गर्दा प्रयोग गर्न सक्छन्।
सधैं दोहोरो आफ्नो स्थानीय भवन कोड र एडीए निर्देशन जाँच गर्नुहोस् सम्झना।
यी सिफारिस हाइट्स थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय आवासीय कोड (आईआरसीकुराकानी), अपांग ऐन संग अमेरिका को आवश्यकताहरु र राष्ट्रिय भान्सा र स्नान संघ द्वारा प्रकाशित लिइएका हुन्।
मानक मिरर स्थापना उचाइ
दर्पण दर्पण को प्रकार आधारमा फरक उचाइ स्थापित भइरहेको मा स्थापित गर्न सकिन्छ। एक सामान्य दिशानिर्देश रूपमा, तिनीहरूले 38 र 42 इन्च बीच स्थापित हुन सकेन। यो मापन, को दर्पण को तल उचाइ खत्म तल्ला देखि मापन सम्बन्धित छ। मेरो सिफारिस गर्ने दर्पण को प्रतिबिम्बित खत्म तल्ला माथि 40 इन्च भन्दा कुनै उच्च सतह तल किनारा संग माउन्ट गरिनेछ भन्ने छ। कहिलेकाहीं तपाईं पर्खाल र सौंदर्य उद्देश्यको लागि व्यर्थ संग दर्पण केन्द्र चाहनुहुन्छ हुनेछ। यो स्नान सार्वजनिक द्वारा प्रयोग गरिनेछ जब प्रत्येक शौचालय मा एक पूर्ण-लम्बाइको दर्पण स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ।
बाथरूम अलमारियों लागि स्थापना उचाइ
समतल प्रयोग र तखता प्रकार स्थापित भइरहेको आधारमा अलग elevations मा स्थापित छन्। सामान्यतया त्यसपछि mirrors.However रूपमा, यो बाथरूम को प्रकार फरक हुनेछ र त्यहाँ समतल सट्टा niches छ नयाँ प्रवृत्ति छ, धेरै3खुट्टा र4खुट्टा बीच स्थापित गर्न सकिन्छ।
बाथरूम सहायक प्रतिष्ठान: साबुन डिश / साबुन मेसिन
यो साबुन पकवान 44 इन्च वा उच्च 54 रूपमा इन्च को एक अनुमानित उचाइ मा स्थापना गरिनु पर्दछ। यो साबुन पकवान उचाइ स्थान शवर स्प्रे देखि बाहिर स्थित गरिनेछ। जबकि साबुन औषधि न्यूनतम 40 इन्च मा स्थापना गरिनु पर्दछ र रूपमा 48 इन्च रूपमा उच्च। आदर्श रूप साबुन पकवान 48 इन्च मा स्थापित गरिनेछ; तर, यो एक साबुन औषधि हो भने, आफ्नो पुस बटन स्थित गर्नुपर्छ "अधिकतम एफएफ माथि 44।
तौलिया रिङ स्थापना उचाइ
यो तौलिया घन्टी 50 इन्च र 52 इन्च उचाइ, खत्म तल्ला देखि मापन बीच स्थापित हुनुपर्छ। तपाईं व्यर्थ देखि यो नाप्ने छन् भने हङ गरिनेछ 20-22 इन्च यसलाई माथि छ। सामान्यतया, निरपेक्ष न्यूनतम उचाइ भएको व्यर्थ काउन्टरटप देखि मापन धुने cloths लागि "तौलिया लागि, 36" 18 छ।
को तौलिया रेल उचाइ स्थापना बाथरूम को प्रकार र प्रयोग फरक हुनेछ। रेल नै उचाइ मा बाथरूम बच्चाहरु द्वारा प्रयोग गरिनेछ जब स्थापना गरिनेछ। एक तौलिया रेल 48 इन्च तल माथि स्थापित गरिनेछ। तपाईं पनि विद्युत आउटलेटहरू र सजावटी टाइल काम को स्थान जाँच गर्न चाहनुहुन्छ। धेरै तौलिया रेल स्थापना गर्दा, उच्चतम हुनेछ कि एक उपाय, तब स्तर मा एक तौलिया गुना।
मार्क2इन्च पनि तौलिया तल र दोस्रो रेल स्थापना गर्न ठाउँ हुनुपर्छ जहाँ क्षेत्र तल।
शौचालय कागज रोल बाहक उचाइ?
शौचालय कागज रोल होल्डरलाई तल्ला देखि 19 र 26 इन्च बीच स्थापित गर्न सकिन्छ। अशक्तताको ऐन संग अमेरिका 19 इन्च प्रयोग प्रोत्साहन राष्ट्रिय भान्सा र स्नान संघ आदर्श उचाइ रूपमा 26 इन्च सुझाव गर्दा। तपाईं स्पेस धेरै छैन भने, तपाईं व्यर्थ छेउमा यसलाई संलग्न विचार गर्न सक्छ।
बाथरूम सहायक प्रतिष्ठान: क्याबिनेट
बाथरूम अलमारियाँ सामान्यतया समाप्त तल्ला माथि 54 इन्च मा स्थापित छन्। तपाईं सामान्यतया मानक व्यर्थ एक 36 इन्च प्लस बीच स्पष्ट स्पेस 18 इन्च हुनेछ किनभने छ। कहिलेकाहीं दर्पण / मन्त्री संयोजन त काउन्टरटप माथि 12 इन्च मा स्थापित यो निश्चित हुन छान्नुभएको छ।
बाथरूम सहायक प्रतिष्ठान: लिनुहुन्छ बार
लिनुहुन्छ बारहरू तल्ला माथि कम्तिमा 33 "-36" मा राखिएको हुनुपर्छ। जब स्थापना छेउमा पर्खाल छ लिनु पट्टी 42 इन्च हुनेछ लामो न्यूनतम, स्थित 12 इन्च पनि पछि पर्खाल बाट अधिकतम र पछिल्लो wall.There देखि 54 इन्च विस्तार गर्ने अमेरिकी द्वारा सिफारिस रूपमा लिनु पट्टी स्थापना गर्न कसरी थप जानकारी छ लिनुहुन्छ बारहरू बारेमा हाम्रो लेखमा अशक्तताको ऐन संग।
हात Dryers लागि स्थापना उचाइ
तिनीहरूले मात्र न्यूनतम force.These एकाइहरु लागू तिनीहरूले protrude र contrasting रंग देखि हुनुपर्छ कसरी धेरै आदर विशिष्ट एडीए आयाम पूरा गर्नेछ सजिलै संचालित गर्न सक्षम हुनुपर्छ रूपमा हात dryers, केही थप विशिष्ट निर्देशन छ। को धक्का बटन them.When अगाडि एक भन्दा बढी हात ड्रायर स्थापित छ मा 38 "X 30" कम्तिमा स्पष्ट तल्ला अन्तरिक्ष संग एफएफ माथि 48 इन्च मा स्थापित गर्नुपर्छ, दोस्रो एकाइ 42 "-48" बीच स्थापित गर्न सकिन्छ समाप्त तल्ला माथि।
Armati तपाईं सिकाउनुहोस् कसरी बाथटब refinish गर्न
को बाथटब मा रंग ताजा द्वारा आफ्नो बाथरूम अद्यावधिक गर्नुहोस्।
एक बाहिरी स्नान संग प्रकृति गरौं
बाहिरी वर्षा अब बस poolside र सार्वजनिक तटों लागि छैन। तिनीहरूले छिटो को दैनिक घर बाथरूम एक ताजा साथै बन्ने हुनुहुन्छ।
Armati तपाईं सिकाउनुहोस् एक बाथटब को शारीरिक रचना र कसरी प्रतिस्थापन स्थापना गर्न
हटाउन र विस्थापन गर्न कसरी सहित bathtubs बारेमा सबै जान्नुहोस्।
Armati तपाईं सिकाउनुहोस् कसरी विरोधी-जला दिन वाल्व स्थापना गर्न
तपाईंको शवर मा एक विरोधी-जला दिन वाल्व स्थापना गरेर अचानक शवर पानी तापमान परिवर्तन रोक्नुहोस्।
Armati तपाईं सिकाउनुहोस् कसरी कुना स्नान स्थापना गर्न
यो संकुचित अझै स्टाइलिश शवर किरा सानो स्नान मा स्थान खाली गर्न सक्नुहुन्छ।